XOG: Carabeey oo xiriir la leh Villa Somalia oo dhuunta u galay madaxweyne Xaaf | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: Carabeey oo xiriir la leh Villa Somalia oo dhuunta u galay...
XOG: Carabeey oo xiriir la leh Villa Somalia oo dhuunta u galay madaxweyne Xaaf
Madaxweynaha dowlad gobaleedka Galmudug, Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa tan iyo markii la doortay waxa uu ka dhamaan wayay khilaaf iyo dagaal siyaasadeed oo u gaar ah maamulkiisa ama mid uu la qabo dhamaan maamulada kae.
dagaalka uu ku jiro waa mid ka adag midka ay ku jiraan madaxda maamulada kale ee dalka waxa uuna maamulkiisa ku reebay raadad xun oo ay adag tahay sida looga soo kabto. Khilaafka ugu weyn waxa uu kala dhaxeeya DF Soomaaliya, gaar ahaan Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya.
Xaaf waxa uu waayay ku xigeenkiisa iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka sanado ka hor kuwaas oo noqday qatarta ugu weyn ee Madaxweyne Xaaf maadaama aysan dowladda u soo weerari karin maamulkiisa balse ay u soo marto ragaan.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in Madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabeey uu yahay qatarta ugu weyn ee Xaaf. Waxyaabaha ay ogaatay warbaahinta waxaa kamid ah in Carabeey uu ku guuleestay baajinta dhamaan heshiisyadii uu galay Madaxweyne Xaaf.
Heshiisyada la baajiyay ama socon waayay ee uu Madaxweyne Xaaf galay dhamaantood waxay ahaayeen kuwa dibadda ah oo ay la saxiixdeen hey’ado shisheeyo iyo dowlado kale.
Carabeey ayaa sidoo kale la sheegay in uu helo dhamaan xiriirka hey’adaha heshiiyada la gala Madaxweyne Xaaf kadibna uu baa’bi’iyo waxyaabihii lagu heshiiyay.
Xaaf ayaa qaabilay warqado badan oo uga yimid hey’ado heshiis lala galay oo ka baxay kadib markii lagu wargeliyay in maamulkiisa uu khilaaf ka jiro, sidaas darteedna aysan ku dhiiran karin fulinta mashaariic horumarineed Galmudug oo aan mideesneen.
Madaxweyne Xaaf waxa uu abaabulay doorashada Guddoomiye Baarlamaan oo aan aheyn Cali Gacal Casir balse kuma dhiiran doorashada iyo xil ka qaadista Madaxweyne ku xigeenka waxaana sababta lagu sheegay in uu wali rajo ka qabo in laga joojiyo dabagalka uu ku haayo Carabeey.
Carabeey ayaa sidoo kale buriyay go’aano badan uu dowladda Soomaaliya ka qaatay Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf.